RASMI: Liverpool oo la saxiixatay bedelka goolhaye Simon Mignolet oo maanta kooxda ka tagay – Gool FM
(Liverpool) 05 Agoosto 2019. Kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa shaacisay saxiixa goolhayaha qibradda leh ee Adrian, kaasoo ay kula soo wareegtay beeca xorta ah.
32-sano jirkaan shabaqa ilaaliya ayaa qandaraas cusub u saxiixay kooxda Liverpool kaddib markii uu goolhaye Simon Mignolet uu Reds ka tagay maanta heshiis joogto ah ugu biiray Naadiga Club Brugge.
Waxa Adrian ku soo biiray Liverpool kaddib lix sanadood oo uu joogay kooxda reer London ee West Ham United, balse heshiiska uu kula joogay kooxda ka dhisan caasimadda Ingiriiska ayaa ka dhacay bishii June.
Adrian ayaa kooxda West Ham United waxa uu kaga soo biiray naadiga Real Madrid sanadkii 2013-kii, waxaana goolhayahan reer Spain uu kooxda reer England u saftay 150 kulan.
Waxa uu noqonayaa goolhaye Adrian saxiixii saddexaad ee xagaagan ay sameyso kooxda Liverpool, kaddib markii ay la soo wareegtay Reds labada ciyaaryahan ee da’da yar Sepp van den Berg iyo Harvey Elliot.
Kaddib markii uu heshiiska cusub ugu biiray Liverpool waxa uu website-ka kooxda u sheegay inuu ku farraxsan yahay inuu yimaado oo uu la shaqeeyo kooxdan wayn sida uu yiri, isagoo intaa ku daray inuu shaqadiisa garoonka u bilaabi doono sida ugu dhaqsiyaha badan.